Muqdisho: Beyle Oo Daah-furay Habka Dhaqan-gelinta Miisaaniyadda 2018 – Goobjoog News
Wasaaradda maaliyadda ayaa maanta daah furtay habka dhaqan-gelinta Miisaaniyadda 2018ka iyo sidii ay sare ugu qaadi lahaa dhaqan-gelinta howlaha Dowladda horyaala, iyadoo habka loo soo bandhigaay dhaqan-gelinta Miisaaniyada ay tahay mid ka duwan sanadihi hore.
Sida ay qortay SONNA, Munaasabadda ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka maaliyadda Dr. C/raxmaan Ducaalle Beyle, wasiir ku-xigeenka, xisaabiyaha iyo hanti dhowraha guud ee qaranka, agaasimaha guud ee wasaarada iyo agaasimiyeyaasha waaxyaha Maamulka iyo Maaliyadda.
Wasiirka Wasaradda maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Dr. C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa daah furay dhaqan gelinta Miisaaniyada 2018ka ee Dowladda Soomaaliya isagoona tilmaamay iney muhiim tahay in Miisaaniyada Dowladda noqoto mid laga wada faa’ideysto laguna gaaro horumarka dalka iyo sare loogu qaado kaabayaasha dhaqaalaha.
Hanti dhowraha Guud ee Qaranka Maxamuud Cali Afgooye ayaa sheegay in loo baahan yahay in si wada jir ah looga wada shaqeeyo dowladnimada.
Guddoomiyaha Guddiga shaqaalaha rayidka Xasan Abshirow ayaa sheegay in baahi weyn loo qabo mideynta shaqaalaha Dowladda loona gudbiyo Wasaaradda Maaliyadda.
Uyafar cjxtef generic cialis coupon for cialis
Xskcul chlrsw cialis coupon walgreens cost of cialis
Tigcio jrarsq genaric viagra cialis dosage 40 mg
Bpbttv bxbknp viagra pfizer cialis online
Noysxs dioueq canada online pharmacy Aufsx
Madaxweynaha Puntland Oo Kulan La Yeeshay Nabadoonada iyo Waxgaradka Qardho
cheap name brand cialis cialis generic overnite cialis men [...
cialis cheap online generic cialis from india safe cialis20m...
viagra cialis comparison brand viagra online ca i buy viagra...
ebay viagra pills discount viagra india viagra overnight del...
cialis professional generic cialis cialis without a rx [url=...